सिस्नु लगाउने देउसी- फिचर - कान्तिपुर समाचार
हामीले सांस्कृतिक देउसीलाई बिगारेका होइनौं, बरु समयानुकूल परिष्कृत गर्दै लगेका हौं
सिस्नुपानी संस्था २०५५ सालमा स्थापना भएयता लगातार देउसी कार्यक्रम गर्दै आएका छौं  । योपटक २२ औं देउसी–भैलो खेल्दै छौं  ।
सिस्नुपानी देउसीका सन्दर्भमा एउटा प्रश्न सधैं उब्जिरहन्छ– एउटा सांस्कृतिक पर्वमा पनि किन यस्तो व्यङ्ग्यबाण ? देउसीको आफ्नै परम्परा र इतिहास छ, तपाईहरू किन आफ्नै पारामा ?
हो, यो प्रश्न स्वभाविक हो । तर, हास्यव्यंग्य क्षेत्रमा काम गर्ने भनेर खोलिएको संस्थाको आफ्नै विधिविधान र रीत हुन्छ । हामीले देउसीको भाका र लयलाई खासै चलाएका छैनौं । शब्दमा खेलेका हौं । एक वर्षभर भएका विशेष राजनीतिक, सामाजिक वा आर्थिक घटनालाई जोडेर त्यसमा प्रस्तुतिको प्रहार मिसाउन खोजिएको मात्रै हो । त्यसो भनेर यो गाईजात्राजस्तो निर्बन्ध र स्वेच्छाचारी पनि होइन ।
सुरुमा वर्षभरका घटनाहरू संकलन गरी एक ठाउँ बसेर के विषय छान्ने–के नछान्ने छिनोफानो गरिन्छ । त्यसपछि शब्द लेख्ने र तौलेर शब्द प्रयोग गर्ने काम हुन्छ । लेखनमै समय बढी जान्छ । प्रधानमन्त्रीदेखि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलगायत राष्ट्रका सबै प्रमुख व्यक्तिहरू देउसीमा दर्शक हुने भएकाले धेरै कुरामा विचार गर्नैपर्ने हुन्छ, आग्रह–पूर्वाग्रह हेर्नैपर्ने हुन्छ ।
हामी सबैभन्दा बढी सरकारमै केन्द्रित हुन्छौं । सरकार हामी आम नागरिकको अभिभावकसमेत हो । मुख्य रूपमा देश हाँक्ने, सरसफाइ गर्ने, अनुशासन र नीतिनियमका कुरा थेग्नुपर्ने, पालना गर्नु–गराउनुपर्ने सरकारले हो । यसकारण हामीले हाम्रो अभिभावकलाई नै सचेत बनाउनुपर्ने हुन्छ, झक्झक्याउनैपर्छ ।
हो, देउसी आफैंमा लोकसंस्कृति पनि हो । किंवदन्तीजस्तो बलिराजाका पालादेखि चल्दै आएको भनिने देउसीमा सिस्नुपानीले पनि उही तौरतरिकामा देउसी खेल्दा के फरक हुन्छ त ? हामीले विचार गर्नैपर्ने कुरा के हो भने कुनै पनि संस्कृति वा परम्परा सधैं उही र उस्तै रूपमा चलिरहन्छ भन्ने हुन्न । समय र परिवर्तित अवस्थामा हरचिजमा हेराफेरी हुनु स्वाभाविक पनि हो । प्रताप मल्लका पालादेखि चलेको भनिने गाईजात्रामा पनि आज धेरै परिवर्तन भएको छ । सिस्नुपानी देउसी आफैंमा संस्कृतिका रूपमा विकसित हुँदै जाने क्रममा छ । अहिले कतिपय गाउँघरमा क्लब, संस्थाले सिस्नुपानी शैलीमै देउसी खेल्न थालेको हामीले भेटेका छौं । कुनै पनि संस्कृति कुनै एउटा विन्दुमा सुरु हुने न हो । यसकारण सिस्नुपानीले पनि यस्तै परिमार्जित संस्कृति सुरु गर्दै छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
परम्परामा रहेका कतिपय कुराले संस्कृतिको जगेर्ना त गर्छ तर त्यसले समाजलाई खासै योगदान दिइरहेको हँॅदैन । हाम्रो देउसीले भने सचेतना र जागरणको अर्थमा केही परिवर्तनको संकेत गरेको छ भन्ने लाग्छ । हामीले सांस्कृतिक देउसीलाई बिगारेका होइनौं, बरु परिमार्जित र समयानुकूल परिष्कृत गर्दै लगेका हौं । देउसीका केही संस्करणमा अलिक ठाडो आक्षेप मात्रै जोडियो र कलात्मकताको कमी भयो भन्ने टिप्प्णी पनि आएको थियो । यसबारे पनि हामीले आत्मसमीक्षा गरेका छौं ।
सिस्नुपानी देउसीमा एउटा सिंगो प्याकेज रहने गरेको छ । प्रहसन, कविता, व्यंग्य, देउसी, नृत्यसहितको २ घण्टे प्याकेजमा आधा घण्टा जति मात्रै देउसी हो । तर, चिनारीका हिसाबमा धेरैले यही देउसीलाई मात्रै सिस्नुपानीको विशेषताका रूपमा लिएका छन् । यो हाम्रो सफलता पनि हो ।
यसपटक पनि मुख्यमुख्य घटनाहरू देउसीमा जोडेका छौं । सांसद प्रकरणदेखि सभामुख घटनासम्म, मेलम्ची, रेल, काठमाडौंका मेयर, आलम प्रकरण, वाइडबडी प्रकरण र अरू थुप्रै विषय समेटिएका छन् । कुरा मात्रै गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई पनि यसपटक निकै जोडेका छौं । दुई दशकयताको देउसीमा कुरा र घटना फरक भए पनि शैली–लय एउटै भयो भन्ने गुनासो आउन थालेपछि यसपटक यसमा पनि केही हेरफेर गरेका छौं । प्रस्तुति शैलीमा केही फरकपना ल्याउन चाहेका छौं । देउसीभित्रै पनि भूगोलका विभिन्न फरक ठाउँका फरक लय, गीतिभाका र परम्परागत भाकालाई पनि यसपटक मिसाएका छौं ।
सिस्नुपानी देउसीमा सबैभन्दा मुस्किल भनेको सन्तुलित व्यंग्य नै हो । घटनाहरूको संकलन एकातर्फ छ तर त्यसमा शब्द र संकेत भर्ने काम एकदमै मुस्किलको हुने गरेको छ । सिस्नुपानीको टिमले झन्डै ४ महिनाअघिदेखि देउसीभैलोका शब्द, स्वरलहरी लेखिरहेको हुन्छ । दसैंअघिदेखि भने निकै व्यस्त हुन्छौं । यसपालि पनि दसैंपछि २ दिन २ रात बूढानीलकण्ठको एकान्तमा बसेर शब्द लेख्ने, छान्ने र तौलने काम गर्‍यौं । संगीत र भाकाभन्दा हामी शब्दमा खेलिरहेका हुन्छौं । यो लेखनमा मसहित मनोज गजुरेल, अर्जुन पराजुली, टंकराज आचार्य, सरोज घिमिरे, चक्र दवाडी, हरिकला उप्रेती, थरेन्द्र बराल आदि जुटेका हुन्छौं । गायनमा शिशिर योगी, कमलीकान्त भेटवाल, यमन श्रेष्ठ (प्यारोडी) आदि जुटेका हुन्छन् भने वाद्यवादनमा नगेन्द्रविक्रम राई (बाँसुरी) सहित जोडिएका छन् ।
फेरि यति कुरा जोडिहालौं– सिस्नुपानी आलोचना वा व्यङ्ग्य मात्रै गर्दैन, राम्रा कामकुराको प्रशंसा पनि गर्छ । राम्रा कामको अप्रत्यक्ष प्रशंसा र नराम्रा कामको प्रत्यक्ष आलोचना भइरहेको हुन्छ ।
यसपालिको सिस्नोपानी देउसीका केही टिप्स यस्ता छन् ः
जनताले विश्वास गर्ने कुनचैं बोलीको
मिलिजुली खाको कुरा भन्नै मिलेन
कोही सांसद डन गुन्डा कोही सांसद ज्यानमारा
यिनै सांसद पार्टीलाई परम् पियारा
आफ्ना नेता थुनिँदा कांग्रेस किन बोल्दैन ?
नेपाल बन्द गर्दैन टायर बाल्दैन
बूढो भो कि भुत्ते भो जेठोबाठो पार्टी यो
देखिँदैन हिजोआज कांग्रेस कता गो ?
(सिस्नुपानी नेपालका अध्यक्ष गाम्नांगेसँगको कुराकानीमा आधारित)